Rasmi: UEFA Oo Hakisay Dacwadaha Edbinta Ee Ka Dhanka Ah Real Madrid, Barcelona Iyo Juventus
[ June 19, 2021 ] Argentina oo guul dahabi ah ka gaartay xulka Uruguay.	Wararka Ciyaaraha Maanta
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRasmi: UEFA oo hakisay dacwadaha edbinta ee ka dhanka ah Real Madrid, Barcelona iyo Juventus
June 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain 0
Naadiyada ku adkeystay mowqifkooda ku aadan sameynta European Super League lagama mamnuuci doono Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Xiriirka kubada cagta yurub ee UEFA ayaa go, aan ka soo saaray go, aankii ay ku joojiyeen dacwadihii edbinta ahaa ee ka dhanka ahaa kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus iyaga oo isku dayaya in ay samaystaan ​​mid ka baxsan horyaalada yurub.
“Kadib furitaanka edbinta ee FC Barcelona, ​​Juventus FC iyo Real Madrid CF ee ku saabsan xadgudub ka dhan ah sharciga UEFA ee la xiriirta waxa loogu yeero ‘Super League’, guddiga racfaanada ee UEFA ayaa go’aansaday in dacwadan la sii wado ”ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xiriirka.
Tani waxay imaaneysaa ka gadaal amarka maxkamada Madrid ee ay soo gudbiyeen abaabulayaasha Super League.
Waxaa jira dhowr sharci oo ka dambeeya go’aanka UEFA. Midka ugu weyn ayaa ah in cunaqabateynta seddexda naadi ay ka hor imaaneyso amarka maxkamadda, taas oo horseedi karta in xubnahooda lagu maxkamadeeyo inay la shaqeyn waayeen sharciga.
UEFA ayaa si rasmi ah u joojisay dacwada kooxahan sida goor dhow warbaahinta heshay.
Raphael Varane oo wili go,aan ka gaarin Mustaqbalkiisa Kooxda Real madrid.